Ahoana no hanampiana ny mpivady handresy ady | Bezzia
Maria Jose Roldan | | fifandraisana
Ny fahaverezan'ny olon-tianao dia iray amin'ireo zavatra ratsy indrindra mety hitranga amin'ny olona iray. Sarotra ny manao alahelo ary tena zava-dehibe ny fananana olona akaiky anao hanampy anao handalo trance toy izany. Ao anatin'ny alahelo dia tena zava-dehibe ny singa ara-pihetseham-po ary ara-dalàna ho an'ny olona mijaly izany ny fahatsapana fahatezerana, fahatezerana na tsy fahampiana.
Araka ny efa nampoizina, Misy fiantraikany ratsy eo amin’ny hoavin’ny mpivady ny fihetseham-po toy izany. Izany no mahatonga ny mpivady hanana anjara lehibe amin’ny fanampiana ilay olon-kafa handresy ny fotoan’ny fisaonana.
Torolàlana arahina mba hanampiana ny mpivady handresy ady
Ny zava-dehibe indrindra amin'ny fanampiana ny mpivady handresy olana sarotra toy ny fahafatesan'ny olon-tiana, Ny fiarahana aminy sy ny fanehoana azy ny fanohanana rehetra azo atao. Avy eto dia tsara ny manaraka andian-dahatsoratra na toro-hevitra:
Ny fandavana dia fotoan-tsarotra lalovan'ny olona ao anatin'ny fisaonana feno. Ny asan'ny mpivady dia tokony hiezaka ny hahatonga ny olona ho afaka hanaiky ny fahaverezana sy amin'ny famelana ny tsy negation ho an'ny zavatra rehetra.
Amin'ny fotoan-tsarotra toy izany dia tsy tokony hahatsiaro ho irery ilay olona niharan'ny fahaverezana. Anjaran’ny mpivady ny manohana azy amin’izay rehetra ilaina sy ataovy hitany fa tsy irery izy. Ny famihina tsotra na ny fifampiresahana dia mety ho ampy hanampiana anao hiatrika ny alahelo.
Tsy tsara ho an’ny olona malahelo ny manafina ny fihetseham-pony. Tena zava-dehibe ny ahafahanao maneho ny tena tsapanao amin'ny fotoana rehetra. Ny mpivady dia ampahany manan-danja rehefa afaka mampiharihary ny fihetseham-po samihafa ilay olona nijaly.
Ny alahelo dia dingana lava sy sarotra izay mety hanimba ny karazana fifandraisana rehetra. Ny mpivady dia tokony ho tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ny fifandraisana voalaza etsy ambony araka izay azo atao ary misoroka amin'ny fotoana rehetra mety ho lasa lolom-po. Mila mahay mikarakara ny olon-tianao ianao, mba hahafahanao mandresy tsikelikely ny fotoan-tsarotra sy sarotra toy izany. ahoana ny fahafatesan'ny olon-tiana.
Tena zava-dehibe ny ahafahan'ilay olona niharan'ny fatiantoka afaka mahatsapa malalaka ny fanaintainany sy mandeha amin'ny dingana samihafa amin'ny duel tsy misy olana. Tokony ho loharanom-panohanana na hanohanana ny mpivady fa tsy ho olona manery mba ho haingana araka izay azo atao ny fandehanana amin'ny duel. Raha maharitra ela kokoa noho ny nantenaina ny dingana alahelo, dia tsy maninona ny manatona manam-pahaizana mba hanampy amin'ny famahana olana toy izany.
Raha fintinina dia tsy mora na tsotra ny manana vady misaona ny fahafatesan’ny olon-tiana. Amin'ireny tranga ireny, lasa tena ilaina sy ilaina ny fanohanan'ny mpiara-miasa mba ho resy ny dingana toy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ahoana no hanampiana ny namanao handresy ny alahelo
Manga elektrika, loko maoderina sy mahasahy ho an'ny tranonao